‘बीच बाटोमा ब्यूँझेर’ मा कवि नवराज सुब्बाको बिम्ब चेत (शैलेन्द्र साकार) | Social, musical and literary material
‘बीच बाटोमा ब्यूँझेर’ मा कवि नवराज सुब्बाको बिम्ब चेत (शैलेन्द्र साकार)
February 27, 2010 kaushal Leaveacomment
‘बीच बाटोमा ब्यूँझेर’ मा कवि नवराज सुब्बाको बिम्ब चेत
बिम्ब भन्नु नै शब्दहरूको संवेदनशील चित्र बनाउनु हो । मानिस जीवनभर बिम्बहरूसिँग बाँच्ने गर्दछ । मानिसले देखेको सपना स्वयं बिम्बको राम्रो प्रस्तुति हो । सपना देखुञ्ज्याल आफ्नै वरिपरि रहेको बिम्ब केही समयलाई हराएजस्तो अनुभूति ब्यूँझेपछि हुने गर्छ । तर, त्यो हराएको हुँदैन त्यो अवचेतन मनमा गएर थपक्क बस्दछ । मानिस बिम्बमा जन्मन्छ र बिम्बमा मर्दछ । बिम्ब लेख्न नचाहँदा नचाहँदै पनि लेखिन्छ किनभने त्यो हाम्रो अवचेतनमा रहिरहेको हुन्छ । बिम्बबिनाको कविता प्राणबिनाको शरीरजस्तो हुन्छ, त्या गतिशील हुँदैन । बिचारमात्र लेख्ने प्रयत्न गरे पनि त्यो बिम्बको आवरणभित्र आएको हुन्छ । कोरा विचारमात्र कदापि कविता हुन सक्दैन । त्यो फगत अनुसन्धान र वक्तव्यबाजी मात्र हुनेगर्छ । बिम्बप्रधान रचनाहरू प्रभावोत्पादक र विस्मरणीय हुन जान्छ । कवि नवराज सुब्बाले ‘र्समर्पण’ मा सुरुमै कथ्य बिम्बको प्रयोग गरेका छन् । दर्शन पनि बिम्बको खोल ओढेर प्रकट भएको छ । ‘गयौ सँगै लिएर आफ्नो लास पनि…’ मा उनको दार्शनिक चेत कथ्य बिम्बको माध्यमबाट प्रकट भएको छ । एकजना प्रख्यात कविले कतै लेखेका छन्, ‘नो पोएट नो आर्टिस्ट अफ एनी आर्ट ह्याज हिज कम्प्लिट मिनिङ अलोन ।’
‘बीच बाटोमा ब्यूँझेर’ मेरो सम्मुख छ, डा. गोविन्दराज भट्टराईको लामो भूमिकासहित । उनले सुब्बाका धेरैजसो कवितार् इप्साप्रधान -नोस्टाल्जिक) पाएका छन् । उदाहरणका रूपमा डा. भट्टराईले ‘मेरो पहाड’, ‘आएँ गुरुजी आएँ’, ‘आमाको तिर्सना’, र ‘सतीढुँगानेर अरुण’ लाई अघि सारेका छन् । कवि सुब्बाका सम्पूर्ण कविता बिम्बमय लागेको छ । किनभने उद्धृत शीर्षकका कविताहरू पनि बिम्ब बिधानभन्दा फरकका छैनन् ।
उनको ‘मेरो पहाड’ कविताको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्दछु-
आज लौ यो के देख्दैछु
मैले त मेरो पहाड र दुःख
त्यहीँ छाडी आएँ भन्थें
त्यो त सँगै पो आएछ
अनुहारमा अर्को पहाड जन्मेछ
अनुहारमा अर्को पहाड देख्नु निश्चय नै बिम्बको ज्वलन्त नमूना हो । यसप्रकार अतीतजीवी इप्साप्रधान कविताको यो उपयुक्त उदाहरण हो र सशक्त उदाहरण । तर, यो कवितामा कविले सम्झनालाई बिम्बका प्रतीकमा ढालेका छन् । उनको प्रत्येक कवितामा बिम्बको छवि छ । कवि नवराज सुब्बामा आफ्नो देश र परिवेशप्रति असाध्य चिन्ता छ । त्यो चिन्ताले उनका प्रत्येक कविता सम्प्रेषणीय देशप्रेमको गतिलो नमूना बन्न गएको तथ्यलाई यहाँ बिर्सन सकिँदैन । त्यही देशप्रेमको साक्ष्यको रूपमा मानवता, संस्कृति, विसंगति -समसामयिक बोक्सी, सुकुम्बासी) कुष्ठरोग, एड्स आदि पनि यसमा काव्यिक अवतरण गर्छन् । आजको कविताले सँस्कृतिको आदिम पाटोलाई पनि आफूमा आत्मसात् गरेको छ ।
ऊ… त्यो जुरूक्कै उठ्ने छाल
तम्बरको छालजस्तै छ
आस र लास उन्दै आउने भेल
ठ्याक्कै उस्तै छ
नाङखोल्याङ पहिरो नाच्दै आएछ
पँधेरो जाने गाग्री पनि
नदीले सँगै बगाएर ल्याएछ
घरै छेउमा सँधै बल्झिरहने
एउटा पहिरो थियो
उ पनि मिसिएर झरेछ
मलाई खोज्दै ।
झट्ट हेर्दा माथि उद्धृत कवितांशमा अतीतप्रेम -अर्को शब्दमा आफू जन्मेर हुर्केर आएको पहाड-गाउँको ‘नोस्टालजिक चेतना’) र्छलङ्ग देखिन्छ, तर राम्ररी मनन गर्दै जाँदा हामीले त्यसभित्र बिम्ब प्रतीकहरूलाई बेवास्ता गर्न सन्दैनौं । यथार्थलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने प्रयत्न बिम्बको माध्यमबाट कवितामा आविष्कारित भएको छ । यो कविको आफ्नो आविष्कारजस्तो भएर नितान्त शब्दचित्रका रूपमा प्रकट भएको छ र त्यसले ‘स्वत्व’ को परिकल्पना पनि व्यक्त गरेको छ । यसप्रकार कवि सुब्बा झरेर आएको पहिरोमा पनि आफ्नो परिचय बुन्छन् । त्यो पहिरो पनि आफैंलाई खोज्दै झरेको बिम्ब यहाँ शक्तिशाली रूपमा प्रकट भएको छ ।
कवि सुब्बाले पाँच ‘म’ लाई लेखनको आधार मानेका छन् ।
मृत्यु र महत्ता ।
पुस्तकको शीर्षक बोकेर उभिने कविता ‘बीच बाटोमा ब्यँूझेर’ स्वयं र्सपबिम्बलाई कविताको मेरुदण्ड मानेर पोखिएको छ ।र्
घाम तापेर बसेको छ
बाटो छाडेर भागूँ
कि कसरी र्सपलाई लखेटूँ !
कता अड्कियो खुट्टा
कहाँ भास्सियो जीवन !
लम्पसार छु म आज बीच बाटोमा
बाटो मैमाथि चढेर हिँडिसकेछ ।
प्रस्तुत कवितामा जताततै पाइने शब्दचित्र र अस्तित्वको प्रश्न एकअर्कालाई सघाउँदै उभिएका छन् । कविले बिभिन्न समयमा भोगेका बिसंगतिहरूलाई शब्द दिन यस संग्रहका थुप्रै कविता र्समर्थ लाग्छन् । ती सबै कविताको प्रासंगिकता आजको मुलुकलाई छ । ती कुराहरूको चर्चाभन्दा पनि कवितामा कविले बुनेका बिम्बचेतलाई उल्लेख गर्ने यो लेखको अभीष्ट भएकाले अन्य विविध प्रसंग कुनातिर थन्क्याउँदै छु ।
अमेरिकाका कवि शिरोमणि लरेन्स फर्लिङचेट्टीले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘पोयट्री इज एन इन्र्सर्जेट आर्ट’ मा कविताका बारे धेरै रोचक कुराहरू भन्ने क्रममा एक ठाउँ भनेका छन् –
कवितालाई नयाँ खबर बनाऊ ।
समय निरपेक्ष लेख ।
सत्यको पुनः आविष्कार गर ।
प्रत्येक चीज र बस्तुप्रति प्रश्न गर ।
सुकरातलाई समेत जसले प्रत्येक वस्तुमाथि प्रश्न गरे ।
यसको लगत्तै लरेन्सले आवाजहीन लाटो सडकलाई आवाज दिने कुरा उठाएका छन्, ‘गिभ अ भ्वाइस टू द टङ्गलेस स्टिट ।’ सडकलाई आवाज दिँदा पूरै देशलाई आवाज दिने सन्दर्भ यहाँ भुल्न सकिन्न । ‘बीच बाटोमा ब्यूँझेर’ मा पनि कवि नवराज सुब्बा ‘सडकमा जन्मने बुद्धलाई स्वागत’ मा भन्छन् यसरी –
पैतालाले कुल्चिए पिल्सिए पनि
सुरक्षित हुन्छ सडकको गर्भ
जन्माउनु छ बुद्ध फेरि
र हुर्काउनु छ
अर्का युवा अमेरिकी कवि एरिका जोङले पनि आफ्नो कोखमा बुद्धले प्रवेश गरेको बिम्बलाई ‘बुद्ध इन माई ओम्ब’ मा खुलेरै लेखेकी छन् ।
कवि नवराज सुब्बाका सम्पूर्ण कविता नै बिम्बमय छ । तर ती सबैको उदाहरण या व्याख्या यो लेखको आशय होइन । पंक्तिकार केवल यस संक्षिप्त लेखमार्फ उनीभित्र सचेत रूपमा या अचेतन मनभित्र रहेको बिम्ब चेतनामाथि केही भन्न चाहन्थ्यो र त्यो कुरा यहाँ ब्यक्त पनि भइसकेकै छ । सपनाहरू बिम्बमय हुन्छन् र मान्छेले सपना देख्न नछाडुञ्जेल कविता लेख्न छाड्नेछैन र कविता बिम्बको एउटा सुन्दर प्रस्तुति हो ।
साभार– अन्नपूर्ण २३ माघ २०६६ सालमा प्रकाशित
Previous Postधेरैपछि गुलाफका कुराNext PostLLIN free distribution in Jhapa Nepal